ဟုတ်တယ်နော်.. အပြန်အလှန် နားလည်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်အနား ရှိတဲ့သူက လူကောင်းလေး ဖြစ်နေဖို့က အရေးကြီးတယ်.. :-)
မပန်တို့နှစ်ယောက် ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေ။
အမ တွေမဲ. ဘ၀လက်တွဲဖော် က ဖြူနေတယ် သူဖြစ်နေ ရင် ဘယ်လို လုပ် မလဲ ဗျ ။ သူ.ခမှာ အိုးမည်းသုတ် ပြီးမှ အမ နဲ. ကြိုက်ရမလို ဖြစ်နေမှာပေါ. ။
စတာနော် အမး)
စကားမဆက် မိလို ပါ ။ ကျနော် အမ အတွက် သီတင်းကျွတ်မှာ မီးပုံး ပျံ လွှတ်ပေးဘူး ပါ တယ် ။ ဘာညာ . ပင်ကူ . ကို ဂေါက် . မယ်လိုဒီမောင် တို. နဲ. အတူ ပေါ . ။း)
ဒါဆို မမ က အချစ်ကံကောင်းတာပေါ့ .. ချစ်သူနှစ်ယောက် အမြဲပျော်ရွင်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးတယ်နော် ..... :-)
ကောင်းတယ်ဗျို့ ... ချစ်ခြင်းနဲ့ အပြန်အလှန် နားလည်မှု ... အရေးအကြီးဆုံးဗျ ... ကျွန်တော်ကတော့ ပုံစံခွက် အတိုင်းပဲ ရေးတတ်တယ် ... အမြန်ဆုံး ပျော်ရွှင်ဖွယ် မိသားစု အကြီးကြီး (အကြီးကြီး) ပိုင်ဆိုင်ပါစေ :D
အမတို့ပျော်ရွှင်သော ဘ၀ခရီးကို အမြန်ဆုံးလျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ။
မပန်... အဲဒါလေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ... ကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ်... ဟိ
မပန်...ချစ်တဲ့သူက လူကောင်းလေး ဖြစ်နေတာနဲ့ လူကောင်းလေး ဖြစ်နေလို့ ချစ်သွားတာ နဲ့ ဘယ်လို ခွဲမလဲ။
တွေးထားတဲ့ လက်တွဲဖော်လေးက မျှတပါတယ် ကောင်းတယ်ဗျ ။ ဖတ်ရတာ ရှင်းတယ် ဒေါ်လေးကံကောင်းတာပေါ့ ပန်ဒိုရီလေးက လူကောင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ မှန်းထားတဲ့ရွေးချယ်ချက်တွေနဲ့အားလုံးကိုက်ညီတယ်ဆိုတော့ တော်၂ထူးတဲ့ ဖူးစာရှင်လေးပဲ။
မှတ်ချက်။ ။ အချစ်မှာ အရပ်ပုတာတွေ အသားမဲတာတွေမရှိ အချစ်မှာ အချစ်ပဲရှိသည်။ ဟီး ဆြာလုပ်တာဟုတ်ဘူး ထင်တာပြောတား)
ဟား..ဟား..ဒီခေါင်းစဉ် အရီးပန်ဘက်ကို လှည့်လာသကိုး...။ လူကောင်းလေးဆိုတာ ကြုံတုန်းကြွားးလိုက်တာပေါ့လေ..။ မြန်မြန်လက်တွဲ ..စားချင်ပြီ..။
Your ego is too much:)
၄) ဥာဏ်ကောင်းရမယ်။ စာတော်ရမယ်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာ တော်ရမယ်။
Conclusion: တကယ်ချစ်၍ ကိုယ့်သဘော တစ်ခုတည်းနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးခဲ့သော ဘ၀လက်တွဲဖော်လေးပန်ဒိုရီမှာ ကံကောင်းစွာလူကောင်းကလေးဖြစ်နေခဲ့သည်။ (တခုပဲလိုတော့သည်...Jnrပန်ဒိုရာနှင့်Jnrပန်ဒိုရီမည်သော အိမ်ခေါင်းလောင်းလေးများ)
ပေါက်ကရရေ ဒါတွေ က ငယ်ငယ်က တွေးခဲ့တာပါ။ ဟီးး
မီးပုံးပျံလွှတ်ပေးတဲ့အထဲ ပါတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရွှမ်းမီ၊ ကလေး၊ ကိုစိုးထက်၊ မမြတ်နိုး ပေးတဲ့ဆုတောင်း ပြည့်ပါစေ
ပုံရိပ်.. လောကမှာ လူကောင်းကလေးတွေက အများကြီးရှိတာပဲ မဟုတ်လား။။ ဒါဆို...
အနောနမတ်.. အဲဒါလည်း ဟုတ်နိုင်ပါတယ်။
ကြောင်မျိုး... ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆြာ..
လေးမ.. စားချင်လား။။ ဒါဆို ထပ်ကျွေးရတော့မယ်။
anonymous.. yes. I have lots of jealousy. :P
Ma Thyda: ငယ်ငယ်က အဲလိုတွေးခဲ့တယ်။
မတန်ခူး.. မတန်ခူး က တယ်မြင်သကိုး.. ခုမှရှင်းသွားတယ်နော်..ဟဲဟဲ..
ဆုတောင်းပေးသူများ အားလုံး ကျေးဇူးပါ.။
:)dhtetd... po kan kaung par say....
Sate Chan thar dae Family Life lay ah myan sone ya par say shin!